/Blog/Ithala/Ngaba u-Orlistat usebenza njani njengechiza lokuLawula ilahleko?
ezaposwa ngomhla 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Ngokwedatha evela kuHlaziyo lweHlabathi lweHlabathi, i-United States ikumanqanaba eli-12 kwihlabathi liphela ngokutyeba kakhulu kubemi bayo. IZiko loLawulo lweZifo (i-CDC) liqikelela ukuba ama-36.9% abantu abadala baseMelika ngaphezulu kweminyaka engama-20 ubudala batyebile, ngokubhekisele kwidatha eqokelelweyo ngo-2016.
Iinkcukacha-manani ezisemthethweni zibonisa ukuba ama-41.1% abasetyhini, kwaye ama-37.9% amadoda - okanye ngaphezulu kwe-160 yezigidi zaseMelika, alwa nokukhuluphala. Izibalo ezikhoyo zibonisa ukuphindaphindwa kokutyeba kakhulu kubemi baseMelika kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo.
Ngelishwa, idatha ayijongeka ngcono kulutsha lwaseMelika, nokuba. Phantse i-15% yabo bonke ulutsha kunye nabantwana banokutyeba kakhulu okanye batyebe kakhulu, ephindaphindwe kathathu xa kuthelekiswa nee-1980s.
Ngokwedatha evela kwi-State of Obesity, idatha yakutshanje evela kwi-Behavioral Risk Factor Surveillance System (i-BRFSS), ibonisa amazwe alithoba anamanqanaba okutyeba ngaphezulu kwama-35%. I-Kansas, iFlorida, iNew Mexico, i-Utah, iMissouri, iMinnesota, neNew York zonke zabona ukunyuka kwamaxabiso okunyuka kwabantu abadala kunye nabantwana phakathi kuka-2017 no-2018. (1,2)
Ke, kutheni le nto iMelika ijongana nobhubhane wesifo sokutyeba okuchaphazela abantu abadala nabantwana kulo lonke ilizwe? Ukutyeba kunokunxibelelana ngokuqatha nokukhetha indlela yokuphila engalunganga. Abantwana badlala ngaphandle kancinci kunokuba benzayo kwi-1980s, ngenkqubela phambili kubuchwepheshe bokungenisa imidlalo yevidiyo kunye nezinye iindlela zokuzonwabisa ezigcina abantwana behleli phantsi.
Abantu abadala baneenkonzo zokuzonwabisa kunye nokuhanjiswa kokutya kufumaneka ngokulula malunga nexesha. Konke ukulungeleka okongeziweyo kubomi bethu kongeza kukusebenzisa kakhulu iikhalori, kwaye kungabi nokuzilolonga ngokwaneleyo ukutshisa amandla ongezelelweyo.
Ukutya iikhalori ezininzi kwiimfuno zakho zamandla kukhokelela emzimbeni, ukugcina amandla ashiyekileyo njengamafutha. Ukukhetha indlela yokuphila engalunganga, ukutya okune-calorie-dense ephezulu kwi-carbohydrate kunye namafutha amabi, kwaye akukho nto ingako yokwenza umthambo, yindlela yokufumana ukutyeba-Konke oku kuthatha ixesha.
I-AASraw ngumthengisi ofanelekileyo wokulahleka kobunzima be-powder-Orlistat powder
Nceda ucofe apha ngolwazi lwamaxabiso. Unxibelelwano nathi
1. Yintoni i-Orlistat?
Ukutyeba kuthintela umgangatho wobomi bomntu ochaphazelekayo. Nangona kunjalo, ngelixa abantu abaninzi baseMelika beqonda ukuba ukutyeba kakhulu kunokuba nefuthe elibi kwimpilo yabo, bambalwa kakhulu abagqibe ekubeni benze okuthile ukunqanda ukuqhubela phambili kwabo ekutyebeni kakhulu.
Uninzi lwabantu abatyeba kakhulu kunye nokutyeba kakhulu abanalo ulwazi kunye noqeqesho olufunekayo ukwenza utshintsho lomzimba okanye ukutya okune-calorie. Kulawo aqala inguqu yomzimba, engaphantsi kwe-5% yokulawula ukufezekisa ubunzima bawo.
Inyani yile yokuba ukulahleka kwamafutha omzimba ogqithisileyo xa utyebe kakhulu okanye utyebe kakhulu ngumceli mngeni ekubonakala ukuba bambalwa abanokuwoyisa. Ukutshintsha imikhwa yokuphila, ukutshintsha indlela otya ngayo, kunye nokuqala kwesicwangciso somthambo kufuna isixa esibalulekileyo sokuzinikezela egameni lomntu otyebe kakhulu.
Ngaphandle kwesikhokelo kunye nokuphefumlelwa, umntu otyebileyo ulahlekelwe yintshukumisa yokuguqula imizimba yabo, ebenza ukuba babuye kwimikhwa eyenzakalisayo.
Inkqubela phambili kwisayensi yesondlo kule minyaka ingama-20 idlulileyo ivelise into enomdla nenomdla kwizisombululo zamayeza ekulawuleni nasekunyangeni ukutyeba. "I-grail engcwele" yophando lwe-pharma kukudala ipilisi yokulahleka kwesisindo evumela abantu abatyebileyo ukuba babuyisele imizimba yabo kwi-BMI esempilweni.
Unokufumana ukuthandabuza nayiphi na isondlo okanye ugqirha okuxelela ukuba kukho ipilisi yokunciphisa ubunzima esebenzayo.
Orlistat, eyaziwa ngegama lamagama e-Alli kunye ne-Xenical, inokubakho ichiza lokulahleka kwesisindo elinikezela abantu abatyebileyo ithuba lokubuyisela imizimba yabo empilweni.
Abantu abagqithisileyo banokuthenga i-Orlistat ngaphezulu kwekhawuntari kwi-60mg (Alli). Inguqulelo ye-120mg (Xenical), ifuna iphepha likagqirha lokuthenga kunye nokusetyenziswa. Kukho iinguqulelo ezininzi eziqhelekileyo ezifumaneka kwi-Intanethi ngokunjalo.
I-Orlistat sisiyobisi esenzelwe ukuxhasa inkqubo yokutya kunye nokuzilolonga komntu. Ke ngoko, asinakuyibiza njengepilisi yokulahleka kobunzima ngokungummangaliso, kuba isafuna ukuba umsebenzisi abeke iinzame kwindlela abatya ngayo nasekuzilolongeni.
Nangona kunjalo, iingxelo zomsebenzisi zibonisa ukuba i-Orlistat sisiyobisi esisebenzayo sokukhawulezisa ukulahleka kobunzima xa ilawulwa ecaleni kwesikhokelo esifanelekileyo sesondlo kunye nezikhokelo zokuzilolonga kwiimfuno zomntu otyebileyo.
Abantu abadala abangaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala banokuthenga iitafile ezingama-60mg Orlistat ngaphezulu kwekhawuntari, ngokuxhomekeka ekubeni banomzimba oyi-Mass Mass Index (BMI) engama-25 nangaphezulu. Abantu abatyebileyo kakhulu abane-BMI engaphezu kwama-30 banokutyelela ugqirha wabo ukuya kufumana amayeza e-120mg Orlistatethe ukuba asetyenziswe ngokudibeneyo yokutya okunciphisa umzimba.
Ogqirha banokuvuma ukusetyenziswa kwenguqulo ye-120mg kubantu abane-BMI abangaphantsi kwama-27, ukuba bayakujongana nezinye iingxaki zempilo, ezinje ngesifo seswekile okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu. Abo bantu basebenzisa i-Orlistat phantsi kweliso likagqirha banokufaka isicelo sokuba i-inshurensi yabo ihlawule iindleko zamachiza.
Nangona kunjalo, ayingabo bonke abantu abakhusela i-inshurensi. Ukufumana umthengisi we-Orlistat kwi-intanethi kulula, kwaye izikhombisi zamaxabiso e-Orlistat kubathengisi abakwi-Intanethi ziyahluka, kuxhomekeke kudumo nomgangatho.
Ke, isebenza njani i-Orlistat?
I-Orlistat ibhloka iphecana le-GI ekufunxeni amanqatha kukutya okutyayo. Ngenxa yoko, amanqatha angavunywanga ekutyeni kwakho adlulela kwinkqubo yakho yesisu, apho umzimba uwukhulula ngento emnyama.
Iicarbohydrate kunye neeproteni zine-calories ezi-4 zamandla kuzo zonke iigram. Nangona kunjalo, igram yamafutha iqulethe i-9-calories. Ke, umbono emva Ukusetyenziswa kwe-Orlistat kukuthintela abantu abatyebileyo ekufunxeni lo mnongo wekhalori-mninzi.
Abantu abatyebe kakhulu batya ukutya okunamafutha aphezulu, kwaye ukutya abakukhethayo akunampilo. Ngokuthintela ukutya okwekhalori kunye nokutshintsha ukutya okutyebileyo kukhetho olusempilweni, umntu otyebe ngaphezulu uya kuqala ukubona iziphumo zeveki-ngeveki kwangoko kutshintsho lomzimba wabo.
Nangona kunjalo, abantu abatyebe kakhulu banokuthatha ukuya kwiminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 yokuzibophelela kuzinzo lotshintsho kukutya, imithambo kunye nendlela yokuphila, phambi kokuba babuye kwi-BMI esempilweni.
Ukuhlala uqinile kuguquko lokulahleka kwesisindo oluhle kangaka kucela umngeni kuye nawuphi na umntu. Ke ngoko, abantu abatyebe kakhulu banokuxhasa inkqubo yabo yokutya neyokuzilolonga kusetyenziswa iOrlistat ukukhawulezisa iziphumo.
2. Ngaba i-Orlistat ivunywa njengeKhuselekileyo ukuze isetyenziswe yi-FDA?
Njengaso nasiphi na isiyobisi, i-Orlistat yaya kuhlalutyo olunzulu kunye nokuvavanywa yi-FDA. Ukuvunywa kwe-Orkomat FDA kudlule ngo-1999 phantsi kwenombolo yeCAS 96829-58-2.
I-FDA yavavanya iinguqulelo ezinophawu lweli chiza kuvavanyo lweklinikhi ngo-1999, ivuma inguqulelo yeXenical yamayeza alungele ukusetyenziswa kunye nokukhokelwa ngugqirha oqeqeshiweyo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iXenical ifumaneka kuphela phantsi kommiselo.
I-FDA ivume u-Alli (60mg Orlistat) njengekhuselekileyo ukuba isetyenziswe kubantu abtyebe ngaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala. Nangona kunjalo, inguqulelo ye-60mg iyafumaneka ukuba ithengwe ngaphezulu kwikhawuntara. Ngelixa inguqulelo ye-OTC isetyenziselwa kunye nokutya okunesithintelo, okunamafutha asezantsi, akukho bungqina busemthethweni besikhokelo xa kufuneka umntu ethethe kakhulu. uthenge i-Orlistat ngaphaya kwekhawunta.
I-FDA ilandelela zonke iingxelo zeziphumo ezibi kubasebenzisi baka-Alli no-Xenical, iinguqulelo eziphawuliweyo ze-Orlistat. Iarhente ifumene amawaka ezaziso kubasebenzisi ngokubhekisele kwiziphumo ebezingalindelekanga kunye neziganeko ezimbi zempilo ezenzeka ngexesha lokusebenzisa amayeza.
Ngezi ngxelo ezininzi ezimbi zempilo, inokuothusa abanye abasebenzisi ezinokubakho kude nokuzifaka kwinkqubo yokulahleka kwesisindo. Nangona kunjalo, inyani kukuba iziganeko ezichaseneyo zempilo ezichazwe kwi-FDA luluntu, zenziwa kuphela ngu-Alli kunye noXenical, kwaye hayi ngokukodwa i-Orlistat.
Ukuza kuthi ga ngoku, abukho ubungqina beklinikhi obucebisa ukuba i-Orlistat inoxanduva kwimicimbi yezempilo egwenxa efunyanwa nguAlli kunye nabasebenzisi beXenical. Kunokwenzeka ukuba ezi ngxaki zingavela kwesinye isithako esisetyenziselwa ukwenziwa kwamayeza.
I-FDA iyaqhubeka nokuphanda iziphumo ebezingalindelekanga kunye nemiba enetyhefu ngokusetyenziswa kwe-Alli kunye neXenical. Nangona kunjalo, kusafuneka ikhuphe nayiphi na ingxelo malunga nokuyeka ukhuseleko kunye nokuvunywa kwamayeza.
I-FDA ikwakhathaza into yokuba ifumana iingxelo ezi-1 kweziganeko zilishumi ezimbi. I-arhente ibuye yaqhuba iimvavanyo malunga nesibindi sobuthi be-Alli kubasebenzisi ngo-2007.
Izilingo ziquka ukuhlalutya idatha yangaphambi kweklinikhi, yonyango, yokuthengisa, kunye nokusetyenziswa kweziyobisi okunxulunyaniswa nokunxila kwesibindi kunye nokwenzakala ngenxa yokusebenzisa amayeza e-Xenical branded. (3)
Iziphumo zophando ziqukumbela ukuba iXenical ayinakunxibelelana ukudala ityhefu ekrakra okanye ukwenzakala.
Nangona kunjalo, i-FDA ichonge iimeko ezili-12 kuhlalutyo lwentengiso lwasemva ngokunxulumene nokulimala kwesibindi okubangelwa yiXenical, kunye kunye nokusetyenziswa kuka-Alli. Uphando ngakumbi lobungqina lubonisa ukuba ezinye izinto ezinegalelo, ezinjengokupheliswa komzimba, kunye ne-off-label okanye ukusebenzisa iziyobisi, zinokubangela unobangela wokulimala kwesibindi kwezi meko. (4)
3. I-Orlistat njengesiyobisi seLight Loss
Ngexesha elizayo xa uhamba ezantsi kwindlela yokuncedisa kwi-GNC yakho yendawo, jonga kwicandelo lokulahleka kwamafutha. Uya kufumana uninzi lweemveliso ezilahlekayo kumandla kunye nefomathi yeepilisi. Inkqubo ye- yokunciphisa umzimba Ishishini lishishini lezigidi zeedola, kwaye zininzi izinto ezenziwayo ezizama ukulawula esi sithuba.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Orlistat sisiyobisi sokulahleka kwesisindo, hayi ukongezwa kwesisindo. Ukuba uthatha izongezo ezininzi zokulahleka kobunzima, unokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezinobushushu, ezinje ngesisu esibuhlungu okanye ukonyuka okuncinci kukhuthazo kunye nobushushu.
Nangona kunjalo, ukusetyenziswa gwenxa okanye ukuxhatshazwa kwezamayeza isisindo sokulahlekelwa kwesisindo, njenge-Orlistat, inokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu ezinokuba nefuthe kwimpilo-ntle yakho ixesha elide.
I-Orlistat isebenza kakuhle, kwaye abanye abasebenzisi banokuthatha isigqibo sokunyusa umthetho olandelwayo ukuphucula iziphumo zabo. Nangona kunjalo, esi sicwangciso siqinisekile sokufaka umsebenzisi kubunzima obuthile ngempilo yabo. Sebenzisa i-Orlistat kuphela ngokudibeneyo nolawulo lwezonyango, ngakumbi ukuba usebenzisa ifomathi ye-120mg.
A: Ungalahla njani ubunzima ngokuthatha i-Orlistat?
Xa ufezekisa ukusetyenziswa kwe-Orlistat yokunciphisa umzimba, umsebenzisi kufuneka alandele ingcebiso kugqirha wezonyango, ngakumbi xa usebenzisa ifomati ye-120mg yeyeza. Ngaphambi kokuba umntu aqalise inkqubo yokulahleka kwesisindo, kufuneka babe ne-mindset echanekileyo yokwenza inguqu eyimpumelelo yomzimba.
Umntu onengxaki yokukhuluphala okanye ukutyeba kakhulu kufuneka aqonde ukuba iyeza alikho impendulo kwiingxaki zabo. Isisombululo kuphela sokunciphisa umzimba ixesha elide kukuhlengahlengiswa kokutya, iindlela zokuphila, kunye nokungeniswa kwenkqubo yokuzilolonga.
Ngaphandle kwale mindset, umntu otyebe kakhulu okanye otyebe kakhulu uya kuthi ekugqibeleni azame ukuxhomekeka ekusetyenzisweni gwenxa kweyeza xa bengaziboni iziphumo abazifunayo kwimizamo yabo. Ukusetyenziswa gwenxa kwesi siyobisi ukunciphisa umzimba kunokubandakanya ukukhula kweziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzakalisa impilo yomsebenzisi.
Xa usebenzisa i-Orlistat nangayiphi na indlela, qinisekisa ukuba ulandela imiyalelo yethamo edweliswe kwisitya, okanye usokhemisi usasaza amayeza. I-Orlistat dosayo zinokwahluka ngokuxhomekeke kwi-BMI yomntu. Nangona kunjalo, sukuyithatha iyeza ixesha elide kunokuba umiselwe, okanye udweliswe kufakelo lweemveliso.
Abantu abatyebe kakhulu kunye nokutyeba kakhulu banokusebenzisa i-Orlistat ecaleni kokutya okukhethekileyo, okunamafutha asezantsi, kunye nokutya okuthintela ikhalori. Xa kusenziwa isicwangciso sokutya somntu ngamnye, izondlo kufuneka ziqinisekise ukuba amanqatha awaphenduli ngaphezu kwe-30% yeekhalori zizonke nakuphi na ukutya.
Umntu otyebileyo kufuneka alandele ukutya kunye nesicwangciso sokuzilolonga, kunye nedosi ye-Orlistat ngokwemiyalelo yogqirha. Uninzi lweeprotocol zokukhutshwa kukhupha imithamo emithathu yamayeza ngalo lonke usuku lubekwe ngokwahlukeneyo.
Ukuba umsebenzisi weqa isidlo, baya kuthi ke bahle iodosi ye-Orlistat efunekayo kweso sidlo.
Ukuba utsiba isidlo okanye usitya isidlo esingaqulathanga manqatha, yeqa idosi yakho ye-Orlistat yeso sidlo. Umsebenzisi kufuneka aqale ukuhoya iilebheli zesondlo kukutya. Funda uluhlu lwezithako kunye noluhlu lwezondlo, kwaye uphephe ukutya okunamafutha amaninzi.
I-Orlistat inokuphazamisana nokufakwa ngokufanelekileyo iivithamini ezinganyibiliki emanzini ekutyeni kwakho. Ke ngoko, abaguli kufuneka bacele ugqirha wabo ukuba acebise uhlobo lwevithamini abanokulungenisa ngelixa besebenzisa amayeza.
Abasebenzisi kufuneka kwakhona babeke iliso kumthamo kunye nokusetyenziswa kweyeza. Orlistat sisiyobisi esinokusetyenziswa gwenxa kwesikripthi. Ke ngoko, abanye abantu banokuntywila kwiyeza lakho ukuba awunikeli ngqalelo ekusebenziseni kwakho.
Thatha naluphi na ukongezelwa okanye amanye amayeza ubuncinci kwiiyure ezi-2 ngaphambi kwethamo yakho ye-Orlistat. Esi sicwangciso sobuchule sokuthintela sithintela naziphi na iimpembelelo ezimbi kunye namanye amachiza osenokuba uwasebenzisa. Ukuba ukolunye uhlobo lonyango, qiniseka ukuba uxelele ugqirha wakho ngaphambi kokuba usebenzise i-Orlistat.
B: Yintoni Endifanele Ndiyithintele ngelixa ndisebenzisa i-Orlistat?
Xa uthetha-thethana nodokotela wakho malunga nempilo yakho kunye nesicwangciso sakho sokubetha ukukhuluphala, qiniseka ukuba uxoxa ngayo yonke eminye imicimbi yakho yezempilo nodokotela wakho. Ugqirha kufuneka aqonde onke amayeza owasebenzisayo ngoku ngaphambi kokuba anikezele i-Orlistat.
Amanye amayeza anokubangela ukuchasana namanye amachiza, kukhokelela kwiziphumo ezibi kumsebenzisi. Kuya kufuneka wazise ugqirha wakho malunga nokusebenzisa kwakho nawaphi na amayeza alandelayo.
Amayeza eswekile yomlomo okanye ukusebenzisa i-insulin
ICyclosporine (iSandimmune, iNeoral, iGengraf)
ILevothyroxine (Levoxyl, Synthroid, iLebothoth)
Amayeza anciphisa igazi njenge-warfarin (Coumadin)
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olu ayilo luhlu lubanzi lwamachiza olunokubangela iingxaki kusetyenziso lwe-Orlistat.
Yenza idinga kugqirha wakho ukuze uxoxe ngawo onke amayeza kagqirha, amancedo, kunye nezinye iimveliso ze-OTC ozisebenzisayo ezinokubangela ukujongana nako xa usebenzisa i-Orlistat.
Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko kufanelekile thatha i-Orlistat Ngaphandle kokubuza kwingcali yezonyango. Ngelixa uguqulelo lwe-60mg lufumaneka ngokulula ukuze lusetyenziswe ngokusetyenziswa kwe-OTC, umsebenzisi kuya kufuneka abonane nengcali yezonyango ngaphambi kokuyongeza kwisicwangciso sabo sokutya nesokuzilolonga.
Xa uthathwe kwiidosi eziphezulu okanye ixesha elide, i-Orlistat inokubangela iingxaki zempilo. Abo bantu bacinga ukuba banokugqithisa kwi-Orlistat kufuneka babize umnxeba kwi-hotline uncedo ngokukhawuleza kwaye babize i-ambulensi.
Izigulana kufuneka zithintele ukuthatha i-Orlistat ukuba ngaba zinakho naziphi na izinto zokwenza iallergies kwizithako kunyango. Musa ukuthatha i-Orlistat ukuba ujongene nayiphi na imeko yonyango.
Isifo esinganyangekiyo se-malabsorption
Uhlobo lweswekile I okanye II
Ukuphazamiseka kwindlela otya ngayo anorexia okanye bulimia
Ukuba okwangoku usebenzisa naliphi na amanye amayeza okunciphisa umzimba okanye iimveliso ze-OTC
4. Yeyiphi Iziphumo onokuyilindela ekusebenziseni i-Orlistat?
Kubalulekile ukuba abantu baqonde ukuba ayikho into enje ngokuba "sisiyobisi esimangalisayo sokulahleka kwesisindo." Ngelixa ukusetyenziswa kwe-Orlistat ecaleni kokutya okuthintela ikhalori kunye nenkqubo yokuzivocavoca kuya kukhawulezisa ukunciphisa umzimba kubantu abatyebe kakhulu okanye abatyebe kakhulu, kufuneka basete ulindelo lwangempela kwinkqubo.
Iziphumo ze-Orlistat Umahluko kuye komnye umntu, kuye kuthi kanti ngenxa yokuba umntu ngamnye enethemetiki kunye nohlobo lomzimba. Nangona kunjalo, ungalindela ukuba ireyithi yokuphulukana namafutha ibe sezingeni eliphakathi, kwaye ukusebenzisa eli chiza kunokukunceda ukhulule iipawundi ezimbalwa ngeveki kunokutya kunye nezicwangciso zokuzilolonga zodwa.
Nangona kunjalo, ukulindela ukulahleka ngokukhawuleza kwamafutha akukho ngqiqweni. Amathuba okuba kuthathe isigulana iminyaka ethile, mhlawumbi kunye namashumi eminyaka, ukufikelela imeko yabo yangoku yokukhuluphala. Ke ngoko, ukulindela ukuba amanqatha anyibilike ubusuku bonke, okanye kwiinyanga nje ezimbalwa, kuya kushiya umsebenzisi eziva ehlisiwe kwaye edanile ngeziphumo zabo.
Oogqirha bachaza ukwehla kobunzima obunentsingiselo ekliniki njengokunciphisa ubunzima bomzimba womntu, we-5% okanye nangaphezulu konyaka. Izifundo zibonisa ukuba ngaphezulu kwe-40% ye Abasebenzisi be-Orlistat bafezekise le njongo, ukuba nje balandela iingcebiso zobugqirha ngugqirha kunye nokondla.
Olu phando lukwabonisa ukuba abo bantu babedla ukutya okunesithintelo kwikhalori, kunye nokufumana umthambo rhoqo, kunye nokusebenzisa i-Orlistat, baphulukana nomyinge we-5.7-lbs ngaphezulu kweqela lokulawula ababengasebenzisi i-Orlistat. (5,6)
(1) Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa i-Orlistat?
Kukho inzuzo enkulu yokusebenzisa i-Orlistat njengenxalenye yenkqubo yokulahleka kwesisindo eyakhiwe kakuhle nokubek'esweni. Eli chiza liyasebenza ekuthinteleni umzimba ekufunxeni amanqatha, ngaloo ndlela kuncitshiswa kakhulu inani elibalulekileyo leekhalori ezifakwe kwisigulana.
Nangona kunjalo, ngelixa i-Orlistat iluncedo olongezelelekileyo ekutyeni okunciphisa umzimba, kwaye ivelisa iziphumo ezibonakalayo, asinakugqitha ekubeni abantu akufuneki basebenzise eli chiza njenge-crutch. Abo bantu baxhomekeke kugqirha okanye isongezelelo njengelitye lembombo lenkqubo yabo yokulahleka kwesisindo baya kuba neziphumo zokungabikho.
Abanye abantu abenzi zinguqu kukutya kwabo okanye amanqanaba okuzivocavoca kwaye, endaweni yoko, baxhomekeke ku-Orlistat ukwenza umsebenzi. Nangona kunjalo, aba bantu baya kuzifumana baphoxekile ngenxa yeziphumo zabo zokunciphisa umzimba.
Izibonelelo ze-Orlistat Inkqubo yokwehla kobunzima enesakhiwo esichaziweyo kunye neenjongo ezicacileyo. Akunakulindeleka ukuba isigulana sibe nolwazi okanye inkuthazo yokugqibezela utshintsho lomzimba sisodwa.
Ke ngoko, ukuqesha isondlo kunye nomqeqeshi, kunye nokulandela inkqubo esekwe yokutya neyokuzilolonga kufuneka kuye nakubani na owenza inkqubo yokuthoba umzimba.
Uninzi lwabantu abatyebe kakhulu kwaye batyebe kakhulu bafumanisa ukuba bafumana ilahleko enkulu yokulinganisa ubunzima kwiiveki ezimbini zokuqala zokutya ngendlela esempilweni kunye nokuzilolonga- kwaye ngaphambi kokuba bazise naziphi na izongezo okanye iziyobisi ezinje ngeOrlistat.
Nangona kunjalo, abanye abantu banokuzabalaza ukunciphisa ubunzima bonke nangona belandela inkqubo efanelekileyo yokutya kunye nokuzilolonga. Abanye banokuthi bafumanise ukuba inkqubela yabo yamabala ngokukhawuleza besebenzisa iindlela zendalo. Aba bantu banokufumana ukuba i-Orlistat iyabanceda kule meko, ibavumela ukuba bafumane ubunzima bokunciphisa umzimba ngokuguqula umzimba.
(2) Yeyiphi ingozi yokusebenzisa i-Orlistat?
Abantu abathile abacinga ukusebenzisa i-Orlistat kufuneka bathathe ixesha elithile ukuphonononga uluhlu lweempembelelo ze-Orlistat ezinxulumene nokusetyenziswa kweziyobisi. I-Orlistat lonyango olunamandla olwenzelwe ukusetyenziswa kunye nokutya okuthintela ikhalori okucwangciselwe umntu otyebileyo ngumntu onesondlo.
Inguqulelo ye-OTC yamayeza inokufumaneka ngokuthengwa ngaphandle kokuyalelwa, kodwa akukho mntu kufuneka asebenzise i-Orlistat ngaphandle kokuthetha nogqirha wabo kwangaphambili.
Kwizilingo zeklinikhi ezibandakanya ukulawulwa kweXenical kwizigulana, iipesenti ezingama-27% ziye zaphuhla ioyile kwizambatho zabo zangaphantsi, iipesenti ezingama-24% yabasebenzisi abanamava irhasi elandelwa kukukhutshwa ngokuzimeleyo, iipesenti ezingama-22 zabasebenzisi abanamava okuqala okungxamisekileyo. Inani leentshukumo zamathumbu, kunye nama-11% ukungafikeleli komzimba.
Uninzi lwabasebenzisi, ukuhambisa isisu sisiphumo esichaphazelekayo sokusebenzisa amayeza, ngakumbi xa kuqala ukusetyenziswa kwetyala lesisindo.
Ukuphendula kwe-allergen kulo mayeza kunqabile, kwaye ezinye zeziphumo eziqhelekileyo zabasebenzisi abanamava kwiiveki ezimbalwa zokuqala ukusebenzisa i-Orlistat zibandakanya oku kulandelayo.
Amabala eoyile okanye amabala kwingubo yakho yangaphantsi
Amafutha okanye izihlalo ezinamafutha
Ioyile enemibala e-brown okanye e-orenji kwisitovu
Irhasi ehamba kunye nokukhutshelwa kweoyile
Isihlalo esikhululekileyo, ukunyuka okungxamisekileyo, kunye nokungakwazi komsebenzisi ukulawula iintshukumo zamathumbu abo
Ukunyuka kwesantya sokuhamba kwamathumbu
Isicaphucaphu, ukugabha, isisu esibuhlungu, urhudo, kunye nentlungu esexesheni
Ukukhathala kunye nobuthathaka, izitulo ezinombala wodongwe, umchamo omnyama, ukuphelelwa ngumdla, ukulungiswa, okanye ukubonakala kwejarice (ityheli labamhlophe bamehlo okanye ulusu)
Eminye imiba engaqhelekanga kwizigulana enayo xa ithatha i-Orlistat ibandakanya oku kulandelayo.
Imiba eneentsini kunye namazinyo
Ukuphuhliswa kweempawu ezifana nokubanda
Uphuhliso lweempawu ezinjengomkhuhlane
Intlungu yentloko kunye nentloko
Imithambo emsulwa kulusu olugqithisileyo
Abasebenzisi kufuneka bazi ukuba olu luluhlu olubanzi lweziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzeka xa usebenzisa iOrlistat. Ukuba ufumana iziphumo ebezingalindelekanga okanye impendulo engalunganga kumayeza, xela amava akho kwi-FDA nge-1-800-FDA-1088.
5. Bathini Abasebenzisi malunga neOrlistat?
Ukujonga uphononongo lwe-intanethi ngabasebenzisi, kukhokelela kwiziphumo ezahlukeneyo, zombini ngokuchasene nokusetyenziswa kwesiyobisi. Uhlolo lwe-Orlistat Uluhlu lwabantu abafumene iziphumo ezibalaseleyo kwabo bafumana eyona miphumo mibi.
Nangona kunjalo, kuyabonakala ukuba uninzi lwamatyala abandakanya abantu abatyeba kakhulu, okanye abane-BMIs ngaphezulu kweminyaka engama-27, banamava afanelekileyo ngechiza. Lonke uphononongo oluqinisekileyo esilifumene kwichiza lokulahleka kwesisindo belivela kubasebenzisi abanolwazi ababesenziwa inguqu yomzimba ezandleni zonyango.
Ke ngoko, aba bantu baqulunqa isicwangciso sabo sokulahleka kobunzima ngokuchanekileyo. Bonke baqesha ugqirha wezempilo, bafumana unyango rhoqo ngekota, kwaye babambelela kumgaqo wokuchonga owacetyiswa yingcali yabo yezonyango.
Nanku umzekelo weziphumo zehlabathi ze-Orlistat esizifumene kwi-intanethi.
"Igama lam ndinguRon, kwaye ndandityebe kakhulu kangangokuba oko kwakubonakalisa ubomi bam. Ngokuhamba ngefestile, nempilo yam inkenenkene, ndiye ndacela uncedo kugqirha wam. I-doc indidibanise ne-dietician, kwaye ndaqonda iimfuno zam zekhalori zosuku.
Emva kweenyanga ezi-6 zokutya kakuhle kwaye ndibaleka yonke imihla, ndabona iziphumo ezilungileyo, kodwa inkqubela yam yaqala ukuma. Ugqirha wam ucebise ukuba ndizame iXenical (Orlistat). Khange ndiyicinge kangako, kodwa ukuncipha kwam kuyaqhubeka emva kosuku lwesibini ndisebenzisa iyeza.
Emva konyaka, kwaye ndiziva ngathi ngumntu omtsha. Ndiphakathi kwinqanaba lobunzima bam, kwaye iiponti ziyaqhubeka ukuza. "
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ayinguye wonke umntu oya kuva esi siphumo, kodwa le yimilinganiselo elungileyo yeziphumo onokuzilindela xa yonke into ihamba kakuhle.
Kulo mzekelo, iziphumo zikaRon bezizezona ziphumo zintle, kodwa loo nto ayithethi kuthi omnye umntu akakwazi ukuziphindisela iziphumo ezifanayo, ukuba banezolawulo oluchanekileyo lwezonyango.
6. Ukuthatha okuPhambili kokusebenzisa i-Orlistat njengesiyobisi sokuLawula ilahleko
Ukutyeba kakhulu kunoyikisa impilo yabantu baseMelika kwilizwe lonke. Amanani okutyeba kakhulu ayenyuka kubo bonke abantu abadala, ulutsha, kunye nabantwana, kunye neMazantsi ne-Mpuma ye-US e-United States.
Ukutyeba kakhulu kukhokelela ekuphuhlisweni kwemiba emininzi yempilo engapheliyo, njengesifo seswekile, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kunye nesifo sentliziyo. Le meko ikwenzeka ngokusweleka kwe-18% yabo bonke abantu baseMelika abaneminyaka engama-40 kuye kwengama-85 ubudala.
Abantu abaninzi baseMelika babhenela kwiziyobisi nakwizincedisi zokuncedisa ukukhawulezisa iinkqubo zabo zokunciphisa umzimba. Nangona kunjalo, uninzi lwaba bantu alwenzi ngokwaneleyo ukutshintsha indlela abaphila ngayo, ukutya, kunye nokuzilolonga ngaphambi kokusebenzisa ezinye iindlela zokunciphisa umzimba.
Abantu baseMelika kufuneka baqonde ukuba akukho ndlela imfutshane yokulahla amanqatha omzimba. Ukufumana ulwazi lokutya ngokuchanekileyo kunye nokuzilolonga kwimikhwa kubalulekile ekulawuleni ubunzima bomzimba wakho. Ngaphambi kokubhenela ekusebenziseni iziyobisi ezinobungozi, kungcono ukuba uqiniseke ukuba utya ukutya okufanelekileyo kwaye uzilolonga ngokuchanekileyo kuqala.
Cinga kuphela ukusebenzisa i-Orlistat emva kokubonisana nodokotela wakho malunga nenjongo zokunciphisa umzimba. Ugqirha wakho uya kukuthumela kwisondlo esifanelekileyo sesicwangciso sokutya esihlangabezana neemfuno zakho zekalori yokulahleka kwamafutha.
Abo bantu abazama inkqubo yokulahleka kwesisindo kufuneka baqinisekise ukuba bakha iqela elijikeleze bona ukuba bafuna ukubona iziphumo. Ugqirha wakho, isondlo, i-physiotherapist, kunye nomqeqeshi wakho wokwenza iqela lakho lokukunika ithuba elifanelekileyo lokoyisa nayiphi na imiqobo kwindlela yakho yokufezekisa iinjongo zakho zokunciphisa umzimba.
I-Orlistat ifana nokongeza i-jet ipetroli kwi-injini esebenza kakuhle. Xa izigulana zinendlela yazo yokutya kunye neendlela zokuzilolonga eziphantsi kolawulo, ukongeza ichiza lokunciphisa umzimba njenge-Orlistat kungakhawulezisa iziphumo.
Ngaphambi kokuba bathathe isigqibo sokuthatha i-Orlistat, abaguli kufuneka banxibelelane noochwephesha kwezempilo ukuze babone ukuba bayazifezekisa na iindlela ezifanelekileyo zonyango.
Xa ujonga iziphumo zamava omsebenzisi nge-Orlistat, yingxowa edibeneyo yeziphumo. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi abo bantu bathatha i-Orlistat ngokuyalelwa ngugqirha kwaye baqesha iqela elifanelekileyo lenkxaso ukufezekisa iziphumo abazifunayo.
Kwiphepha leflip, baninzi abantu abanamava amabi ngokusebenzisa i-Orlistat. Kungenxa yesi sizathu ukuba kubaluleke kakhulu ukuba abantu bathathe i-Orlistat phantsi kononophelo lwengcali yezonyango.
I-Orlistat ibonelela ngabantu abatyebileyo nabanotyeba kakhulu ngeFDA evunyiweyo ngaphezulu kwendlela yokumelana neinzame zokuphucula iinzame zokuphulukana nobunzima.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba zonke izigulana ezisebenzisa iziyobisi, zifuna imfundo malunga nokuguqulwa kokuziphatha okuqhubekayo ngexesha lokusebenzisa iziyobisi, ngokunjalo.
Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Iziphumo ze-orlistat zedosi ephantsi kumgangatho wobunzima bomzimba kubantu abanokuthoba okunesilinganiselo: iveki eli-16, iimvavanyo ezilawulwa kabini ngamehlo, ulingo lwe-placebo UAnnekhemisi. 2006; 40 (10): 1717-1723
Smith Smith, Stenlof KS, Greenway FL, et al. I-Orlistat 60 mg inciphisa i-visceral adipose izicubu: iiveki ezingama-24 ngokungalawulwa, indawo elawulwa nge-placebo, kunye nolingo oluninzi. Ukutyeba kakhulu (Isilivere eSky). Ngo-2011; 19 (9): 1796-1803.
I-Synephrine HCL Powder-Isitshisi esinamafutha kunye nezixhobo zokunciphisa umzimba	Yonke into omele uyazi ngePregabalin